သံမဏိတင်စင် S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.
November 9, 2018, 2:06 am / dean814c4.thezenweb.com
အလယ်ွတကူအသုံးပြုပစ္စည်းတင်စင်သည်လိုအပ်တဲ့အထပ်အမြင့် အလိုက်တပ်ဆင်လွယ်ခြင်း ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းရာမှာ အဆင်ပြေ လယ်ွကူခြင်းရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့်ပြန်သိမ်းခြင်းလယ်ွကူသည်။ ကာဝါနိုက်အရောင်တင်ခြင်းနှင့် ဆေးရောင်မှုတ်ခြင်းကို မိမိစိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားမျိုးစုံ မှာယူနိုင်သည်။
+662 150 website 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078
Comments on “သံမဏိတင်စင် S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.”